Ugcina njani uVimba-OutBüro
Kumanqaku ethu okucacisa kunye neevidiyo, sizama ukunxibelelana neempawu, izibonelelo, kunye nezicwangciso zokuphucula i-OutBuro yabo bobabini abaqeshi njengophawu lomqeshi kunye neqonga lokufumana italente. Ukuqhubeka ukunceda LGBTUluntu lwase-Q luyayiqonda indlela yokuyisebenzisa njengonxibelelwano lobuchule kunye neqonga lokukhangela umsebenzi.
LGBTQ Ukulingana kweQumrhu-Uluhlu lweeNkqubo zakho zoPolitiko
Disemba 6, 2019 (ehlaziyiweyo ngoDisemba 6, 2019) E papashwe ngu UDennis Velco
Ngaba inkampani yakho inikela ngePro-LGBT kwaye-LGBT abezopolitiko kulo naliphi na inqanaba likarhulumente ukusuka esixekweni, kwisithili, kurhulumente / kwingingqi ukuya kumanyano / kuzwelonke? Sebenzisa i-www.OutBuro.com njengeqonga lokufaka uphawu lomqeshi ukuze udwelise ngokufanelekileyo iminikelo yakho yezopolitiko ngesizathu esifutshane sokuba kutheni ibalulekile kwinkampani. Asisoloko sivumelana nezimo zonke zopolitiko kwaye kubomi nakwishishini ngamanye amaxesha kufuneka sinxibelelane nabantu okanye imibutho abanokwabelana nge-100% yeembono zethu.
Abezopolitiko abaziwayo ukuba abachasiLGBTI-Q inokuba kwindawo yokuba ibalulekile kwinkampani kunye nokukwazi kwayo ukukhula nokukhula. Ngokusebenza kwaye usichaze kwi-OutBüro yakho LGBTQ Ukuphawula uMqeshi rekhoda uya phambili kwincoko ngaphambili LGBTImibutho ye-Q kunye neentatheli zichaza kakubi ngawe. Nikezela irekhodi elipheleleyo elichaza yonke into oyenzela eyakho LGBT abasebenzi kunye noluntu ukuze kube lula ukubona ukuba umkhulu kangakanani kumqeshi. Yiba nenxaxheba. Sifuna ukuba ukhanye.
bona i inkxaso iphepha lazo zonke izikhokelo zomsebenzisi ezikhoyo ngoku.
LGBTUluhlu loMdwelisi kuluhlu lomqeshi
Amanyathelo okuBanga uluhlu loMqeshi kwi-OutBüro
Amanyathelo okongeza uLuhlu loMqeshi ngumntu oGunyazisiweyo
Amanyathelo okuLawula uLuhlu lweNkampani yoMqeshi kuLuhlu lwe-OutBüro
tags: LGBTQ Ukulingana kweQumrhu, Iminikelo yezopolitiko
Ukureyitha / ukujonga kwakhona umqeshi wakho njenge LGBTQ Umqeshwa - LGBTQ Ukulingana kweQumrhu
Disemba 5, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Ngaba ubungazi namnye LGBTIsalathiso sokulingana kwamashishini kwihlabathi liphela sithatha ilizwi lakho njenge LGBT umqeshwa ingqalelo? Kungenxa yoko le nto ku-www.OutBuro.com kubaluleke kakhulu ukuba ukalishe / uphonononge umqeshi wakho ukuze ubanikeze LGBTQ Umdibaniso weNdawo / yeNdawo yokuSebenza esekwe kule nto uyithethayo, umqeshwa, kuba ilizwi LAKHO libalulekile. Joyina isiza ngaphandle kweendleko kwaye ukuba umqeshi wakho wangoku okanye wokugqibela akakho kwisiza ungazongeza nazo ngaphandle kwendleko.
Abaqeshi banokufaka ibango / bongeze uluhlu lwabo. Ubhaliso lwabo lonyaka lusekwe kwinani lilonke labasebenzi. Ifikeleleka kakhulu kumashishini amancinci kwaye amaxabiso akhuphisanayo amakhulu.
LGBTUQikelelo loMqeshi / uVavanyo ngokutsha [Ividiyo]
Ukulinganiswa kwabaqeshi / Izikhokelo zoPhononongo
Amanqanaba okuVavanya uMqeshi wakho njenge LGBT Umsebenzi
Amanyathelo okongeza iNkampani yoMqeshi wakho kwi-OutBüro
Apha ngezantsi zizikrini ezimbalwa zoVavanyo loMqeshi / zoPhononongo lwezikrini zokungena- hayi i-100% apha. Jonga isikhokelo somsebenzisi senkxaso yokujonga ngokubanzi ukuba kuyafuneka.
tags: LGBTQ Ukulingana kweQumrhu
I-OutBüro yeeYantlukwano kunye neeNgcali ezibandakanyayo- LGBTQ Ukulingana kweQumrhu
Ngaba ungumahluko wokwahluka kunye nokubandakanywa komcebisi okanye ubuchule bokubandakanywa kokwahluka kumqeshi? I-OutBüro yeyakho. Ukusuka ekufuneni LGBTAbagqatswa abasebenza Q ekusebenziseni isiza njengeqonga lophawu loMqeshi elibonisa yonke inkampani / umbutho LGBTQ imigaqo-nkqubo enobubele, izibonelelo kunye nezenzo zeshishini ezivela ekusebenzeni LGBTUkuqeshwa kwabasebenzi, igalelo lezopolitiko, LGBTQ intengiso ebandakanyayo, ukuxhaswa kwe LGBTQ zezoshishino kunye / okanye nemibutho yoluntu, ukubeka iliso kumanqanaba / uphononongo ukusuka LGBTQ yangoku kunye nabasebenzi bangaphambili, ukusingathwa kweefayili zakho LGBTQ Iqela leZibonelelo zaBasebenzi kwi-Intanethi kwiQela le-OutBüro, nangaphezulu.
Sifuna ukuba umbutho wakho ukhanye. Nawuphi na umqeshi. Nawuphi na ubungakanani. Naphi na emhlabeni. Mema eyakho Abasebenzi ukukala / ukuphonononga umbutho wakho namhlanje. Qhagamshelana nathi Ukufunda kabanzi.
bona i inkxaso iphepha lokufikelela kuzo zonke izikhokelo zomsebenzisi wangoku.
Umqeshi ukuBhenca skrini-ayisiyi-100% yenkqubo. Jonga amakhonkco angentla ukujonga ngokubanzi.
Udidi: Ukwahluka kunye nokubandakanywa, Kwenziwa kanjani
tags: Intengiso ebandakanyayo
Disemba 4, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
I-OutBüro liqonga lakho lophawu lomqeshi ukubonisa yonke into inkampani / umbutho wakho enayo kunye neyenzayo ukuxhasa eyakho LGBTQ Iinzame zokuLingana kweNkampani ukuxhasa abasebenzi bakho, abathengi kunye nabanini zabelo. Sifuna ukuba ukhanye kwaye uphumelele. Nokuba ungakanani na ngokwasemthethweni (ngokwenzuzo, ngokungenzi nzuzo, iqumrhu likarhulumente okanye enye into). Nawuphi na ubungakanani bombutho wakho ukusuka kubasebenzi abayi-5 ukuya kuma-500,000. Naphi na emhlabeni.
Ukuba unayo LGBTQ abasebenzi kwaye / okanye ungathanda ukutsala abagqatswa abasemgangathweni www.OutBuro.com luphelele LGBT iqonga lophawu lomqeshi.
Ndwendwela indawo ukuze ufunde ngakumbi kwaye Qhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo kwaye ungathanda ukuthetha malunga nendlela onokuyisebenzisa ngayo indawo ukuze ubukhule ubukho bakho kwi LGBT Kuluntu.
LGBTImilinganiselo yeQ yokuLingana kweNkampani-Indlela eNtsha yabo bonke abaqeshi
LGBTQ Umlingani woShishino ngokuLingana ukuPhawula nokuHlola
Amanyathelo ama-6-ukuphucula LGBT Ukulingana emsebenzini
LGBTQ Umqeshi weeyantlukwano kunye neempawu zokubandakanya.
Lo mmandla omnye kuphela kwabaninzi bakho Umqeshi ukuBhenca ingxelo ibonelela. Jonga izikhokelo ezilapha ngasentla kunye nevidiyo ujongo olupheleleyo.
tags: UkuLingana kweZiko, Umqeshi ukuBhenca, Ukulingana emsebenzini
Ngubani Owona Mngxunya wakho uphakamileyo LGBTQ Umqeshwa? LGBTQ Ukulingana koMqeshi ukuPhawula
Disemba 3, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Ngaba ungumqeshi nge LGBTQ abasebenzi? I-OutBüro yeyalo naluphi na uhlobo lomqeshi, nabuphi na ubungakanani naphina emhlabeni. Yisebenzise njengophawu lomqeshi kunye nenqanaba lokulinganisa / lokujonga kwakhona ukubonisa konke okwenzela kwakho LGBTQ abasebenzi, abathengi kunye nabathengi kwiqonga elinye elidityanisiweyo. Zibandakanye, utsale kwaye ubonise ukuba mkhulu kangakanani umbutho wakho kuyo yonke into oyenzayo.
Chaza inani labasebenzi onalo xa bebonke kwaye bangaphi abaziwayo ukuba bangaphandle LGBTQ, ukongeza, yongeza kwelona liphezulu LGBTQ umsebenzi kumbutho wakho. Zininzi Izifundo zibonise ngokucacileyo xa umbutho wamkele ngokupheleleyo LGBTQ Ukulingana kwamashishini bayayiphucula imigangatho yabo yezemali ngenxa yezinto ezininzi. Coca okanye wongeze eyakho Ukubeka uphawu kumqeshi irekhodi ku-www.OutBuro.com namhlanje.
Bukela le vidiyo ukuze ufunde ngakumbi- LGBTUluhlu loMdwelisi kuluhlu lomqeshi
Kuqala, bhalisa simahla akhawunti yobuchwephesha kwaye ugcwalise iprofayile yakho. Bona i Ikhasi leNkxaso imiyalelo njengoko kufuneka. Amakhonkco anikezelwe apha ngezantsi ukuze uqalise.
tags: Ukuzibandakanya kwabasebenzi, LGBT Imilinganiselo yoMqeshi, LGBTQ Ukulingana kweQumrhu
Ngaba uyayifumana imali LGBTQ Ngaba Ungumnini-mashishini OngenaNzuzo?
Disemba 2, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Ngaba ungumtyali mali weengelosi, i-capital-capital fund okanye inkampani evulekileyo okanye efuna ngokuqinisekileyo LGBT amashishini abenakho ukutyala imali okanye ukuxhasa ngemali? www.OutBuro.com liqonga lokuba ufumane LGBTQ unamashishini amele ukuthathelwa ingqalelo. Bonisa kwi NgaphandleBüro LGBTIprofayili yobungcali ukuba ungumtyali mali weengelosi okanye ingxowa-mali ye-capital-capital okanye esinye isixhobo senkxaso mali ukuze abanini bamashishini bakukhangele.
Sebenzisa inkqubo ukuze ufune abo bafuna inkxaso-mali nabo. Yongeza eyakho NgaphandleBüro LGBTQ umqeshi Uluhlu lwenkampani yakho kwaye ubonise ukuba ngubani omxhasayo kunye / okanye ongaxhasa ngemali. Oo shishino okanye imibutho engenzi nzuzo inokubuyela kwi-OutBüro yabo LGBTUluhlu lomqeshi bonisa ukuba ungumthombo wabo wemali. Joyina namhlanje. Iprofayile yakho yobungcali isimahla kwaye irekhodi lomqeshi wakho lixhomekeke kwinani labasebenzi onabo kwiziko lakho elisemthethweni.
Ukubonisa uMtyali mali okanye uMxhasi weNkxaso mali kwiProfayile yakho
1. Khetha malunga nokujonga iprofayili yakho yobungcali.
2. Skrolela ezantsi ukukhangela icandelo loMxhasi weShishini. Cofa ku Hlela iqhosha.
3. Yenza ukhetho lwakho (ok) kwi-drop-down kwaye ucofe ku Gcina iqhosha.
Hayi hayi mna
Utyalo mali lweNkunzi
Ishishini / Umbutho Umxhasi
4. Ukhetho lokubonakala kwendawo lubekwe ngolawulo njengokujongwa ngamalungu esiza kuphela.
Uluhlu loMqeshi-Inkxaso mali iyafumaneka LGBTQ Amashishini okanye Imibutho Yabanini
Kwiinkampani kunye nabatyali mali, ibango / yongeza eyakho Uluhlu loMqeshi ukubonisa iintlobo zakho zenkxaso mali LGBTQ Amashishini angabanini kunye / okanye iingeniso.
tags: Imali yokuqala okujikayo
SUKUBA UNGENALO LGBTQ Ukulingana kwindawo yokusebenzela-Gqibezela iProfayile yakho
Novemba 30, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Ukunxibelelana nezinye LGBTQ iingcali, oosomashishini, kunye nabaqeshi be LGBTQ Abaqeshi kwezokulingana emsebenzini bakuvumela ukuba uqhubele phambili ikhondo lomsebenzi kunye neshishini. Kodwa akukho mntu uyithandayo indawo yeendaba zentlalo eneqela leeprofayili ezingenanto. Fumana uninzi lwe-OutBüro yakho LGBTIprofayili yobungcali.
Njengoko ugcwalisa okungakumbi kwi-intanethi yakho kwi-www.OutBuro.com uvula amanqaku ale ndawo ukuze ukwazi ukuthatha inxaxheba kumsinga womsebenzi kunye nokunye okunje ngokuthumela amanqaku azakuvela kwibhlog yesiza kwaye athathe inxaxheba kumaqela akwi-intanethi. Ngaphaya koko, unakho ukubanakho, ukunxibelelana kunye nokuzibandakanya nabanye, ukuthumela iifoto zomsebenzi wakho ngokungathi ungumculi kwipotifoliyo yakho, thumela iividiyo, ujoyine kwaye uthathe inxaxheba kwiqela kunye nokunye. Yiza uncede wenze ifayile ye- LGBT indawo yoluntu kunye noosomashishini kwihlabathi apho ukhoyo Yeyakho kunye nelizwi lakho imicimbi.
bona i Iphepha lenkxaso yesikhokelo somsebenzisiImiyalelo yokugqibezela i-OutBüro yakho LGBTIprofayili yobungcali.
tags: LGBT Usomashishini, LGBT Inethiwekhi yoBuchule, LGBTQ Abasebenzi
LGBTQ Ukulingana kweZiko Abaqeshi abagxile ekufuna ukukuqesha
Novemba 27, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Imibutho emininzi kunye nabanye abaqeshi abagxile kuyo LGBTQ Ukulingana ngokuhlangeneyo bafuna ukuba ujoyine umbutho wabo. Basebenza nzima ukuphucula kunye nokugcina LGBTIndawo yokusebenza enobuhlobo ebhiyozela iyantlukwano, ukubandakanywa. Izifundo ezininzi ziye zafakazela ukuba ukwenza oko kuyanceda inkampani ukuba ikhule ngokwanda kwemveliso, ukusombulula iingxaki kuyilo kunye nomgangatho osisiseko wezezimali.
Yongeza eyakho LGBTIprofayili yobungcali ye-Q kwi-OutBüro (OutBuro.com) kwaye uyigcwalise kangangoko kunokwenzeka ukuvula onke amanqaku oluntu kwi-Intanethi. Chaza eyakho ukuba uyawufuna nje okanye ufuna ngenkuthalo ithuba elitsha lomsebenzi, ukuvuma kwakho ukuhamba kunye nokuzimisela kwakho ukufuduka. Kwenza kube lula Abagadi ukufumana umgqatswa kuphela bakhangele - nina.
Xa ungene kwiakhawunti yakho ye-OutBüro uza kuyibona indawo yakho yokuhamba kwindawo esekunene.
Ubume beNgqesho ngoku
2. Skrolela ezantsi ukuze ufumane imeko yangoku yeNgqesho uze ucofe ku Hlela iqhosha.
3. Yenza ukhetho olufanelekileyo.
4. Cofa iqhosha eliluhlaza Gcina.
5. Njengakuyo yonke inkalo yeprofayile, unolawulo kumgangatho wokubonakala kwento nganye. Ileyibhile yamaqhosha iya kubonisa useto lwangoku kwaye ngokunqakraza kulo ungenza utshintsho ukuba unqwenela njalo. Ukhetho zezi:
Uluntu (olungena-ungene kwi-site undwendwe lunokulubona nangona sifuna abantu babhaliswe kwaye bangene ukuze babone yonke imimandla yeempawu zoluntu)
Kanye kwiprofayili yakho Malunga nephepha ngala manyathelo angentla, skrolela ukuze ufumane ukulungela ukufuduka icandelo, khetha u-Hlela, wenze ukhetho lwakho kwaye ucofe ku Gcina.
Kanye kwiprofayili yakho Malunga nephepha ngala manyathelo angentla, skrolela ukuze ufumane icandelo lokuLungela ukuhamba, khetha u-Hlela, wenze ukhetho lwakho kwaye ucofe ku Gcina.
Gcwalisa ubuncinci i-50% yeefayile zakho zeprofayili ukuvula zonke iimpawu zoluntu lwendawo.
tags: LGBT Abaviwa, LGBT Inethiwekhi yoBuchule, LGBT Ukulingana emsebenzini, LGBT Ukubandakanywa emsebenzini, LGBTQ Ukulingana kweQumrhu, LGBTQ Abasebenzi
Yenza i-OutBüro yakho LGBTIprofayile yeQ yokuKhanya
Novemba 25, 2019 (kuhlaziywa ngo-Epreli 19, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Ngaba uyafuna ukutsala amathuba oshishino okanye mhlawumbi utsale ithuba elitsha lengqesho kwi LGBTQ obandakanya wonke umntu nokwamkela umqeshi oxhasa LGBTQ ukulingana kwamashishini?
Ukuba kunjalo, qiniseka ukugqibezela i-www.OutBuro.com yakho LGBTIprofayile yobungcali ye-Q kubandakanya ukulayisha i-headshot yobungcali kunye nentloko yeprofayili entle yokutsala kwaye ithi into malunga nomdla wakho buqu okanye ngokomsebenzi. Yenze ibonakale, ibambe, kwaye ikhanye
Yongeza okanye Guqula umfanekiso weNtloko
Njengoluntu, kubalulekile ukwenza imeko yokuthembeka. Inxalenye yokwenza njalo kukwabelana ngemifanekiso eqingqiweyo esekwe kwiprofayile yakho. Njengoko uthatha inxaxheba ekuhlaleni iya kuba yile nto amanye amalungu ayibona rhoqo. Ukuba uthumela amanqaku kule ndawo, iya kufakwa kwiBhokisi yakho yoMbhali ekupheleni kwenqaku ngalinye olithumelayo. Esi sisiza esijolise kubungcali nakusomashishini, ke gcina yonke imixholo yakho kubandakanya nemifanekiso kuloo mgangatho.
Ukusuka kwiprofayili yakho, hambisa imouse yakho phezu komfanekiso weprofayile yomsebenzisi.
Xa umfanekiso wekhamera uvela, cofa.
Utshintsho lwewindows Avatar luyavela.
Khetha "Faka ifoto" kwaye emva koko kuya kuvela umphathi wefayile yefestile. Bhrawuza iiidrives zakho ukufumana umfanekiso wakho kwaye ukhethe njengoko usenza kuzo zonke ezinye usetyenziso. Nje ukuba uyigqibile iya kulayisha kwaye ivele ngokufana noku kulandelayo.
Qaphela umfanekiso wesangqa ngasekunene kwesikrini. Nantsi indlela oza kubonakala ngayo umfanekiso wakho. Ukulungelelanisa ukhethe iqhosha "lomfanekiso wesityalo".
Tsala kwaye ubeke ubungakanani kwakhona kwindawo ekhethiweyo yomkhethi njengoko uthanda. Xa ugqibile cofa iqhosha eliluhlaza "Gcina iThumbnail" ukujonga kwangaphambili. Ukuba ayifezekanga, akukho ngxaki, khetha nje iqhosha u "Crop Image" kwaye wenze kwakhona. Nje ukuba ugqibile khetha iqhosha "Lenzekile".
Ubonakala umhle. Isiqalo esihle.
Ukongeza / ukutshintsha ikhava yeprofayile / umfanekiso we-header
Ukusuka kweyakho Iphepha leprofayile ye-OutBüro Cofa umfanekiso wekhamera kwindawo ephezulu ngasekunene kwendawo yomfanekiso weprofayile.
Izinketho zokuBekwa kwakhona kunye nokuGuqulwa ziya kuvela ngenxa yokuba umxholo weprofayile ongagqibekanga ukhona. Khetha uhlengahlengiso ukongeza umfanekiso wakho.
Ibhokisi leTshintsho lePhepha leKhava liya kuvela. Khetha u-Layisha ifoto. Inkqubo yefestile yomphathi wefayile iya kuvela. Zulazula kwindlela yakho ukuze ufumane umfanekiso owufunayo, emva koko ukhethe kwaye ukhethe u "Vula" okanye naluphi na ukhetho olukwi system yakho.
Kumzekelo wethu, umfanekiso yifayile enkulu kwaye ayibonisi ngokupheleleyo.
Singayibeka kwakhona ukuze ezona ndawo zingcono zomfanekiso zibonakale. Khetha i-icon yekhamera kwaye ngeli xesha ukhethe ikhonkco lokuBeka. Emva koko, cofa nje kumfanekiso obambe iqhosha lemouse kwaye urhuqe umfanekiso uye phezulu okanye ezantsi de ibekwe ngendlela othanda ngayo. Okokugqibela, cofa iqhosha lokugcina.